Miakatra ny fizahantany any Sorrento Coast aorian'ny fialan-tsasatra manirery
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Miakatra ny fizahantany any Sorrento Coast aorian'ny fialan-tsasatra manirery
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Septambra 11, 2021
Namaky 5 aho
Sorrento Coast - Sary © Mario Masciullo
Mpanoratra Mario Masciullo - eTN Italia
Ny morontsirak'i Sorrento, iray amin'ireo toerana itodiana mpizahatany italiana, ankoatry ny morontsirak'i Amalfi, izay nanohana ny mpanoratra sy ny poeta ny Grand Tour teo anelanelan'ny taonjato faha-18 sy faha-19, izay niteraka fidiran'ny mpitsidika iraisam-pirenena, hatramin'ny vanim-potoana mahatsiravina. fanarenana miadana amin'ity fahavaratry ny 2021 ity.
Ny Sorrento Coast dia nahasarika mpizahatany italiana indrindra sy vahiny vitsivitsy izao.
Niverina tanteraka io toe-javatra io nanomboka tamin'ny 1919 ary fanarenana saro-kenatra miandry ny fiverenan'ny lasa.
Ny fahabangana rehefa mandeha ny fotoana noho ny areti-mandringana dia tsy nanova ny toetra sy ny fomban-drazana ao Sorrento sy ny faritra midadasika.
Manokana, ny fanomezana culinary indizeny natolotry ny trano fisakafoanana sy trattorias ao Sorrento sy ny tanàna mifanila aminy, ankoatry ny trano fisakafoanana tantanan'ny chef kintana toa an'i Il Buco sy Donna Sofia, ity farany ankafizin'ny sary mihetsika italiana Sofia Loren, dia mitoetra ho matsiro toy ny mandrakizay.
Soa ihany fa ny zava-drehetra dia mijanona tsy miova ho tombontsoan'ny mpitsidika mahazatra izay faly mahita ireo mpitantana trano fisakafoanana lasa mpinamana rehefa mandeha ny fotoana ary mahita indray ireo menus mahazatra. Ity dia endrika fanajana iray ihany koa ho tombontsoan'ny taranaka vaovao, izay nanamarihana ny fisiany tamin'ny faran'ny volana Jolay.
Fahitana ny Hotel Mediterraneo sy ny faritra filomanosany manokana - Sary © Mario Masciullo
Ny fomba amam-panao amin'ny hotely any Sorrento
Ny tanànan'i Sorrento mitanisa hotely misy kintana 120/30, tantanan'ny ankohonana - fomban-drazana efa zato taona lasa izay. Amin'ity vanim-potoana ity, maro amin'ireo rafitra no lasa fonenana malaza noho ny traikefa amin'ny fitantanana sy ny fandraisana anjara ara-toekarena azo avy amin'ny fizahan-tany sy ny sisa.
The MD sy Pietro Monti, Hotel Mediterraneo, Sorrento - Sary © Mario Masciullo
Tantaran'ny tranga mahaliana
Tantara manitikitika lalina nataon'i Sergio Maresca, Tale Mpitantana (MD) ao amin'ny Hotel Mediterraneo, izay manana fomban-drazana maharitra amin'ny fandraisana olona sy ny fanovana hatramin'ny 100 taona mahery, ary voasokajy ho “tantaram-pitsarana” tokana.
Tany am-boalohany, trano fandraisam-bahiny io trano fandraisam-bahiny io naorina tamin'ny 1912 ary nivadika ho hotely i Antonietta Lauro, "renibe Etta", rahavavin'ny tompon'ny sambo Achille Lauro, renibeny ary reniben'ireo mitantana ny hotely ankehitriny.
“Nahomby ny taranaka ary nanatevin-daharana ny orinasa ny mpiara-miasa vaovao, fa ny toe-tsaina tia mandray vahiny kosa dia tsy miova. Ho anay dia trano lehibe foana io izay mampiantrano ankohonana mahafinaritra ho an'ireo mpiara-miasa sarobidy aminay sy ireo mpanjifantsika taloha sy vaovao ”, hoy ny hotely MD.
Fanavaozana hiatrehana ny ho avy
Fandraisana anjara vonjimaika dia avy amin'ny lalàna Invitalia momba ny fanarenana trano fandraisam-bahiny 12 lehibe ao Sorrento. Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hampiakarana ny fari-pahaizan'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo mpangataka fanampiana tsy azo averina ary indram-bola araraotina.
Ny saikinosy Sorrento, ankoatry ny zavatra hafa, dia mendrika amin'ny fanatrehana manodidina ny 15% ny reniranon'i Campania sy 30% amin'ny faritanin'i Naples, ary mitentina 0.75% amin'ny hetsika fizahan-tany amin'ny hotely nasionaly iray manontolo.
Mikasika izany, ny te hahafanta-javatra no nahatonga ny famotopotorana ny raharaha tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana natao tamin'i Pietro Monti, talen'ny marketing an'ny fananana tokana maharitra zato taona ao amin'ny faritr'i Sorrento, izay niresaka momba ny MD, izay mpahazo tombony amin'ny fandraisana andraikitra fanarenana.
Ny fampindramam-bola, hoy i Piero Monti, dia nanambola mba hanatsarana ny trano fandraisam-bahiny miaraka amina sary mijoro amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny trano misy fanaka izay taratry ny fomba an-dranomasina amin'ny lakile maoderina maoderina. Ny fomba nampiharina dia vahaolana arafitra lamaody sy miasa be vita amin'ny akora mahazatra ny morontsiraka - lava Vesuvian, gorodona vita amin'ny zaridaina izay mampahatsiahy ny tohotra namboarina teny ambonin'ny ranomasina, jiro fanaon'ny mpanjono, ary haingon-trano sy kabinetra vita amin'ny varahina - fitaovana izay misy ny fanodinana azy. ny fakany amin'ny fomban-drazana Neapolitan.
Faritra fisakafoanana ao amin'ny trano fisakafoanana ao amin'ny trano fisakafoanana Donna Sofia natokana ho an'ny vahiny manokana - Sary © Mario Masciullo
Niampy an'izany ny sehatry ny gastronomika sy ny fanovana ny terrasiny ho SkyBar tsara tarehy miaraka amin'ny fahitana any amin'ny Bay of Naples mankany amin'ny volokano Vesuvius. Misy yacht maotera matanjaka ho an'ny vahiny hitsangatsangana any amin'ny nosy Capri akaiky na any an-kafa. Ny fanavaozana sy ny serivisy vaovao, anisan'izany ny morontsiraka tsy miankina, dia nahazo kintana iray hafa ny hotely, ary lasa hotely kintana 5 izy androany.
Mario dia veteran amin'ny indostrian'ny fizahan-tany.
Niitatra eran'izao tontolo izao ny zavatra niainany nanomboka ny taona 1960 rehefa nanomboka nitety an'i Japon, Hong Kong, ary Thailand izy tamin'ny faha-21 taonany.
I Mario dia nahita ny fizahantany manerantany momba ny vanim-potoana vaovao ary nanatri-maso izany
fanimbana ny fotony / fijoroana vavolombelona tamin'ny lasa firenena marobe manohana ny maoderina / fandrosoana.
Nandritra izay 20 taona lasa izay, ny traikefa niainan'i Mario dia nifantoka tany Azia atsimo atsinanana ary nahitana ny kontinanta indiana.
Anisan'ny traikefa niasan'i Mario ny hetsika maro ao amin'ny fiaramanidina sivily
Nofaranana ny sehatra rehefa avy nandamina ny laharam-pahamehana ho an'ny Singapore Singapore Airlines any Italia ho Institutor ary nitohy nandritra ny 16 taona tamin'ny andraikitry ny Sales / Marketing Manager Italia ho an'ny Singapore Airlines taorian'ny fisarahan'ny governemanta roa tamin'ny Oktobra 1972.
Ny fahazoan-dàlana ofisialin'ny mpanao gazety an'i Mario dia avy amin'ny "Ordi Nasionalin'ny mpanao gazety Roma, Italia tamin'ny 1977.
Maty ny iray, am-polony maro no tsy hita popoka tamin'ny loza roa-ferry tany India
Iza no hampiantrano ny UEFA Euro 2028?
Ireo no tanàna 2021 Sakafo tsara indrindra any Amerika
Navotsotra ny mpanatrika ny sidina Hawaiian Air rehefa avy ...
Lisitry ny boky manome aingam-panahy ambony hanampy anao hitombo
Nohavaozina | Fameperana COVID vaovao any Hawaii ho an'ny ...
Ny tranga COVID avo indrindra dia nisy ary nitombo tao Hawaii raha ...
Horohorontany mahery vaika vao noraketina tao amin'ny Nosy ...
Tsaroan'i Amerika ireo niharan-doza 9/11 20 taona taorian'ny ...
Milalao izao ho an'ny fahamendrehana amin'ny vanim-potoana aorian'ny pandemika: IMEX ...
Niakatra 378.4% ny fifamoivoizana nataon'ny mpandeha tao Moskva Sheremetyevo ...
Ny Minisitra Seychelles dia mankasitraka ireo mpitari-dalana ho an'ny ...
Tolotra offset amin'ny karbaona miaraka amin'ny isa bonus haingana ...
Programm TeamMates natombok'i Outback Steakhouse sy ...
Sandals Royal Curaçao dia vaovao tsara ho an'ny fizahan-tany Curacao
Fa maninona no olom-pirenena safidiny daholo ny Costa Ricans?
Aretina COVID amin'izao fotoana izao any amin'ny Toeram-pialan-tsasatra amoron-dranomasina
Fitsidihana ny lapan'ny filoham-pirenena ao Kabul miaraka amin'i Taliban ...
Mitohy miakatra ny isan'ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt
UK manala ny fitsapana PCR tsy maintsy atao amin'ny fanaovana vaksiny ...
Misehoa ao amin'ny hotely fisotroana, araraoty ...
Florida no tena voa, Hawaii no maty tany Etazonia ...
Ny sekreteram-panjakana amerikanina teo aloha Colin Powell dia maty tamin'ny ...
Fitsangatsanganana amerikana: misy dikany ny fanitarana mandat federal
Nanitatra ny famatsiam-bola ho an'ny fiainana dia ny governemanta Alemanina ...
Seychelles Reclaims Award: Top Island Destination any ...
Tsidiho i Britain IZAO raha Vaksiny ianao! Tale jeneralin'ny ETOA Tom ...
Hiverina ny sidina finday amin'ny sidina Lufthansa
Bahamas nanendry an'i I. Chester Cooper ho minisitry ny ...
Seychelles Mamiratra amin'ny mari-pankasitrahana fizahan-tany faha-28
St. Kitts & Nevis dia nanaiky ny fitsapana Antigen ho ...
Misokatra indray i Hawaii ho an'ireo mpitsidika fitsangatsanganana fizahantany miaraka amin'ny ...
Ny fiaramanidina misy olona 6 an-tsambo dia nanjavona tao ...
Ny trano fandraisam-bahiny Hawaii dia mahita ny fihenan'ny fidiram-bola sy ny fivezivezena
Nanao sonia fifanarahana vaovao i Babylona mba hitantana ny ...
Rehefa miresaka azy ny printsy satro-boninkazo saodiana sy praiminisitra espaniola ...
Helikoptera any India: Tsara kokoa amin'ny fotodrafitrasa sy ...
Espaina sy Arabia Saodita mahita lalana mankany amin'ny UNWTO
Ny fizahan-tany any Malta dia manamora ny fizahan-tany ho an'ny mpizahatany avy ...
Tale jeneraly vaovao dia manampy eo amin'ny Vail Resorts
Rioters anti-Vax mahery setra BBC London Studios
Mpitsidika amerikana sy eropeana vita vaksiny feno no ho tombony ho ...